Liferea: Onye na-agụ RSS na-emekọrịta ihe na Google Reader | Site na Linux
Liferea: Onye na-agụ RSS na-arụ ọrụ na Google Reader
Na-egbu ndụ (ndebiri maka Linux Feed Reader or Linux Feed Reader) bụ ngwa desktọọpụ nke na-enye anyị ohere ịnọgide na-emelite na akụkọ nke saịtị anyị kachasị amasị anyị RSS, RDF y Atọm, na-enye ohere ka ịdebanye aha na mbupụ ndebanye aha na usoro IGBOB.
Edere Liferea n'ime Gtk ya mere na ọ bụ 100% dakọtara na Gburugburu Ebe Obibi ndị na-eji ọba akwụkwọ ndị a- Gnome, Xfce). Ọ dị mfe iji na ya mbipute 1.6.5 wetara anyị ọtụtụ nhọrọ. Ihe kachasị amasị m bụ inwe ike ịmekọrịta ya Google Reader, ya mere ekwesighi m imepe ihe nchọgharị iji hụ nke m RSS ọkacha mmasị.
Ọ bụrụ na m, ị na-eji Google Reader ị chọrọ ijikwa ya - Liferea, ị nwere ike itinye ya site na ịgbaso usoro ndị a.
N’ekpe aka ekpe họrọ folda.
Right pịa ya » Ọhụrụ »New Source.
Na mpio mepere emepe ị họrọ Google Reader.
Put tinye email gị site na Gmail na paswọọdụ gị.
Reboots Na-egbu ndụ.
Nke ahụ ga-ezuru enough
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Liferea: Onye na-agụ RSS na-arụ ọrụ na Google Reader
Ọ bụ ezigbo ngwa nke m chọpụtara ugbu a, ekele gị post. dị mwute ikwu na, ọ bụ a nnọọ ejighị n'aka ngwa, ọ dịkarịa ala na Ubuntu 10.10 M jisiri ike na-arụ ọrụ nke ọma!
Ọ dị obere na ụdị Ubuntu ahụ enwere nsogbu, mana ọ nwere ike ịbụ n'ihi na Liferea blog onye edemede dere ihe gbasara ya. Gwa m ụdị nke ọ bụ nke ị wụnyere ..
Ogbe 132 dijo
N'adịghị ka ndị ọrụ ibe mbụ, ọ rụrụ ọrụ zuru oke maka m! ọ bụ ezie na anaghị m eji Ubuntu, mana Linux Mint 13 na eziokwu bụ na ọ na-agba n'ụzọ dị ebube.
Zaghachi ka ị ghae 132
Hotot: Onye ahịa desktọọpụ maka Identica, Twitter na StatusNet